Dhageyso:-Xulista Xildhibaannada Koonfur Galbeed oo bilaawdey | SMC
Home WARARKA MAANTA Dhageyso:-Xulista Xildhibaannada Koonfur Galbeed oo bilaawdey
Dhageyso:-Xulista Xildhibaannada Koonfur Galbeed oo bilaawdey
uddiga Madaxa banaan ee soo xulista Baarlamaanka labaad ee Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxaa ay bilaabeen kulmao ay uga arinsanayaan howlahoodii ku saabsanaa sidii lagu soo xuli lahaa Xildhibaannada Cusub.
Guddiga oo uu dhawaan Magacaabey Cabdi Casiis Xasan Maxamed (laftagareen) ayaa waxaa ay kulamo kala duwan la qaateen Odayaasha Dhaqanka Koonfur Galbeed iyo Ururada Bulshada Rayidka.
Guddoomiyaha Guddiga xulista Baarlamaanka koonfur Galbeed Maxamed Keerow ayaa sheegay in Guddiga ay u kala qeybiyeen Saddex qeybood oo kala ah,Xubno qabilsan xalinta khilaafaadka,Xubno qaabilsan dhinaca Maaliyadda iyo fududeynta wixii loo baahdo iyo kuwo diyaarinaya Xubnaha la soo xulayo,isla markaana ay diiwaan gelinayaan.
Sidoo kale waxaa uu sheegay inay si KMG ah u diyaariyeen xeerkii uu Guddigooda ku Shaqeyn lahaa si ay u fududaadaan howlaha soo xulista Baarlamaanka labaad ee Maamulka koonfur Galbeed uu yeelanayo.
Horaanta Bisha Maarso ee sanadkaan 2020 ayaa la filayaa in la soo geba-gabeeyo howlaha xulista Baarlamaanka koonfur Galbeed,iyada oo Magaalada Baydhabo iyo deegaannada kale ee xorta ah ay ka socdaan kulamo ku saabsan xulista Baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed.
Previous articleDhageyso wararka Turkiga oo lagu eedeeyey Farmaajo oo Rajadii Kheyre god dheer ku riday. Ahmed Amar Bixy
Next articleDhageyso: Faah-faahino ka soo baxaya dagaal ka dhacay gobolka Bay